Maamulaha Delta: 8,000 oo shaqaalaha diyaaradda ah ayaa laga helay COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Maamulaha Delta: 8,000 oo shaqaalaha diyaaradda ah ayaa laga helay COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Xaqiiqda ah in ku dhawaad ​​11% shaqaalaha diyaarada ay tijaabiyeen togan COVID-19 ayaa gacan ka geysatay joojinta kumanaan duullimaadyada Mareykanka oo dhan inta lagu jiro xilliga fasaxa, ayuu yiri Bastian.
Wareysi lala yeeshay Khamiista, Delta Air Lines CEO Ed Bastian ayaa shaaca ka qaaday tirada shaqaalaha diyaarada ee uu ku dhacay fayraska COVID-19.
Sida laga soo xigtay Bastiyaan, 8,000 oo ah Delta Air Lines75,000 oo shaqaale ah ayaa laga helay COVID-19 afartii toddobaad ee la soo dhaafay.
Xaqiiqda ah in ku dhawaad ​​11% shaqaalaha diyaarada ay tijaabiyeen togan COVID-19 ay gacan ka geysatay joojinta kumanaan duullimaadyada Mareykanka oo dhan inta lagu jiro xilliga fasaxa, Bastiyaan ayuu yidhi.
Maamulaha guud waxa kale oo uu saadaaliyay khasaaraha diyaaradda rubuci hore ee sanadka sababtuna tahay lama saadaalin karo COVID-19 iyo noocyada cusub ee sida degdega ah u faafaya sida Omicron.
Bastiyaan ayaa sheegay, si kastaba ha ahaatee, in xaaladdu ay bilaabayso inay sii ahaato, mana jirto maqnaansho jirran oo u xuubsiibtay wax ka sii daran.
"Ma jiraan arrimo caafimaad oo muhiim ah oo aan ka aragnay, laakiin waxay ka saartay qalliinka muddo waqti isku mid ah oo aan haysanay safarkii ugu mashquulka badnaa ee aan aragno laba sano," ayuu yidhi. Waxa uu intaa ku daray in kaliya 1% duulimaadyadii ay shirkaddu joojisay usbuucii la soo dhaafay.
Delta Air Lines waxay ahayd mid ka mid ah shirkado badan oo duulimaadyo ah oo joojiyay duulimaadyadii xilliga fasaxa, maadaama ay ku dhibtoonaysay inay u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka ee COVID-19.
Burburinta ballaaran ee ka dhashay COVID-19 iyo duufaannada jiilaalka ee daran ayaa sababay Delta inay soo sheegto khasaare dhan $408 milyan rubuci ugu dambeeyay ee 2021.
Bishii Disembar, Bastiyaan wada saxeexay warqad codsanaya in Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ay soo gaabiyaan taladooda go'doominta laga bilaabo 10 maalmood ilaa shan maalmood si ay uga caawiyaan yaraanta shaqaalaha, tallaabadaas oo ay dhaleeceeyeen Ururka Kaqaybgalayaasha Duulimaadka.
Dhowr maalmood ka dib, talada waxaa lagu soo koobay shan maalmood oo go'doon ah ka dib markii laga helay COVID-19, haddii aysan asymptomatic ahayn.
Madaxa shirkadda United Airlines Scott Kirby ayaa sidoo kale ku dhawaaqay 3,000 oo ah infekshannada COVID-19 ee togan ee 70,000 ee shaqaalaha diyaaradda ah horaantii usbuucan, taasoo ku qasabtay jadwal dhimis shirkadda.